Ihe 5 ị ga - eme na Rio de Janeiro | Akụkọ Njem
Ihe 5 ị ga - eme na Rio de Janeiro
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Rio de Janeiro
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na touristic South American obodo bụ Rio de Janeiro. Obodo gbara osimiri okirikiri okpomoku ebighi ebi na oke osimiri mara mma abanyela n’echiche zuru ụwa ọnụ dị ka ebe kachasị mma maka ezumike, nwee obi ụtọ ma chefuo ụwa na nsogbu ya. Kinddị Las Vegas mana na mpaghara ndịda.
Ọ dị mfe ịmara ihe anyị ga-eme na Rio tupu ị gbadata, yabụ ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga, dee ndụmọdụ ndị a gbasara njem nleta: Ihe 5 ị ga - eme na Rio de Janeiro nakwa na a gaghị echefu nleta ahụ.
1 Achịcha shuga
2 Morro na Dona Marta
3 Osimiri Copacabana na Ipanema
4 Kraịst Onye Mgbapụta
Ọ bụ ugwu a pụrụ ịhụ na profaịlụ nke agbata obi Urca, n'ọnụ ụzọ Guanabara Bay. Ọ bụ ugwu granite, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iferi, nke bụ akụkụ nke peninshula ahụ nke na-amaba n'oké osimiri. Rio nwere otutu "ugwu" ndia mana odidi nke a enyego ya ihie nke ya.
Ndị njem nleta nwere ike ịrịgo elu ya n'ihe dị ka 396 mita elu eji ụgbọ ala USB, akpọ bondinho. N'ihe banyere ụgbọ ala Sugarloaf emeela agadi, nke nwere ihe karịrị otu narị afọ, ya mere ọ bụ n'etiti ndị kasị ochie n'ụwa. Taa ụlọ ndị ahụ nwere ike iburu ndị njem 65 n'otu n'otu njem a na-ewe naanị nkeji atọ. Atọ nkeji ụgbọ elu na nnukwu 360º echiche.
Ihe dị mma bụ na Sugarloaf ejikọtara ya na ụgbọ ala USB na ugwu ọzọ dị nso mbụ ị ga-eru Morro de Urca na mgbe ahụ Sugar Loaf. You ga-ahụ ebe akụkọ ihe mere eme nke Rio, osimiri Flamengo, Katidral, mbara igwe jupụtara na igwe ojii na otu oge na nkwụsị ikpeazụ, Kraịst Onye Mgbapụta, mmiri mmiri na osimiri Copacabana na aja ya doro anya.
Ọ bụrụ na ịchọghị ịrị elu ngwa ngwa, ị nwere ike ịme ya mgbe niile. Ọ bụ naanị ọkara otu awa ọ nweghị nduzi dị mkpa. Ndị na-arị elu n'ikpeazụ rute Sugar Loaf site na Cerro de Urca ma ọ bụrụ na ị mee nke ahụ, ị ​​nwere ụgbọ ala USB na-akwụ ụgwọ n'efu. N’ikwu okwu banyere ụzọ njem, ịzụrụ tiketi ebe ahụ ma ọ bụ n ’Intanet, nke nwere ego 10%. Ọ na-arụ ọrụ site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere 8 nke mgbede ọ bụ ezie na igbe ọrụ mechiri 9:7 pm na ọnụego ya bụ R $ 50.
Nwere ike iji tagzi, bọs ma ọ bụ metro gaa ọdụ ụgbọ oloko ụgbọ ala, ịpụ na ọdụ Botafogo, na Usoro 1 na 2. Ndị Brazil agbanweela saịtị a ka ọ bụrụ ebe ndị njem nleta enwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ nri, ụlọ ahịa ihe ncheta, ụlọ mposi na ụlọ ngosi ihe ngosi.
Morro na Dona Marta
Ma ebe ọ bụ na ịnọ na Botafogo ị nwere ike ịmata nke a ọzọ Ugwu 352 dị elu ya nnukwu echiche. Ọ bụ ebe na 1996 Michael Jackson dere vidiyo ya "Ha anaghị eche banyere anyị". Ee ee, ọ bụ favela, mpaghara dara ogbenye, mana ọtụtụ ndị njem si n'akụkụ ụwa niile na-eleta ya ebe ndị uwe ojii nọ.
Obodo wuru a michael jackson kpụrụ akpụ ya mere foto enweghị ike ị efu. Enwere ike iru ya na tagzi ma ọ bụ bọs. O doro anya na ị ga-enwerịrị ihe dị ka onye njem n'ihi na ọ bụ favela ka ọtụtụ ndị njem nleta na-agbazite tagzi iji were ha ma nye ha njem ma eleghị anya, ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọmụma mpaghara, ọ bụ nhọrọ kachasị mma.
Osimiri Copacabana na Ipanema
Osimiri a kacha mara amara n'ụwa? Ikekwe. Copacabana dị kilomita anọ n’ogologo ma ọ bụ nzukọ kacha zuo-oke nke oke osimiri na ala. N'ihu ya bụ ụlọ dị oke ọnụ na ụlọ nkwari akụ nwere nnukwu echiche. E kewara ụsọ osimiri n'onwe ya na mpaghara nke otu ọ bụla maara ka esi ewere maka onwe ha: ndị ọgba bọọlụ dị nso na Rua Santa Clara, ụmụ nwoke nwere mmekọ n'etiti Copacabana Obí na Rua Fernando Mendes, dịka ọmụmaatụ.
Osimiri na-amụnye ọkụ n'abalị na o nwere obere osisi na ndị uwe ojii, mana na nke ọ bụla, ọ gaghị adị mma ka ị ghara ịdị njikere. Na ihe banyere Ipanema? Ọ bụ otu ihe ahụ, e dekwara ya n'òtù ndị na-anọchite anya subcultures nke obodo (ndị na-ese ihe, ndị hippies, ndị ntorobịa, ndị gays, ndị bi na favela). Ọ bụrụ na ị na-amasị sọọfụ kpomkwem n'etiti Copacabana na Ipanema ebe surfers na-lekwasị.
Osimiri abụọ ahụ na-ejupụta na ngwụsị izu. Kpachara anya ma ọ bụrụ na ị kpebie igwu mmiri na Ipanema n'ihi na mmiri dị egwu, n'ihi ebili mmiri na ebili mmiri.
Ọ bụ ihe osise art taa bụkwa otu n'ime Ebube asaa nke Modernwa nke Oge A. Nwere 30 mita elu ma dị arọ 1200. Ọ dị n'ime Ogige Ntụrụndụ Tijuca, n’elu elu ugwu Corcovado.
Shouldkwesighi ịga na ngwụsị izu ma ọ bụ ụbọchị igwe ojii ma ọ bụ ụbọchị mmiri ozuzo. Oge izizi na Rio, enweghị m ike ịhụ isi nke igwe ojii. Njem zuru ezu gụnyere iwere Corcovado ụgbọ oloko, toro Kraịst n’ihi na e hiwere ya n’afọ 1884. Ọ mara ezigbo mma, nwee ụgbọ ịnyịnya na-acha ọbara ọbara, njegharị ahụ na-eme ya na nkeji iri abụọs na-agafe agafe ogige ndụ ndụ.
Nwere ike ịzụta tiketi n'ịntanetị ma ọ bụ n'onwe gị ma ọ bụrụ na ị gaa n'oge dị elu n'oge na-adịghị anya. Nleta Kraist bu n’otu oge nleta na Foresta da Tijuca ma obu Ogige Ntụrụndụ Tijuca, Ọhịa nke karịrị puku hekta anọ. Akụkọ ihe mere eme na-ekwu na n'ime narị afọ nke iri na asaa, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịla n'iyi site na osisi na-enweghị atụ iji kụọ kọfị, ya mere, ebe nke a wetara nsogbu na mmiri, e nyere ya iwu ịkụ ọtụtụ puku osisi ruo ihe karịrị afọ iri.
Obi abụọ adịghị ya na ndị Brazil bụ ezigbo ndị ọgba bọọlụ. Ha emeriela iko mba ụwa ugboro ise ma nwee bọọlụ n’ọbara ha. Obi bọọlụ na Rio bụ Maracanã Stadium, ruo ogologo oge ama egwuregwu kachasị ibu n'ụwa.
Ama egwuregwu mepere na 1950 na ogologo oge o nwere ikike maka 200 puku ndị na-ekiri ma mgbe ihe ọghọm gasịrị, nnukwu ụlọ nkwụsị, ọ gbanwere ma taa ọ nwere ikike maka ihe dịka 79 puku ndị nkiri ọ dịghị ihe ọzọ. Ọ bụ eziokwu egwuregwu Mgbagwoju ya na egwu egwuregwu, ebe igwu mmiri na ama egwuregwu ozo pere mpe ma kpuchie ya.
Nwere ike banye maka njegharị, na eduzi nke ahụ na-eburu gị gafee oghere ndị kachasị mkpa nke ámá egwuregwu ahụ: ụlọ ọrụ pịa, igbe ọrụ gọọmentị na igbe nkeonwe, ụlọ ndị na-agbanwe agbanwe, oghere ụzọ ịnweta ebe egwu na n'ezie, ubi ahụ n'onwe ya. Njegharị ndị a na-eduzi kwa ụbọchị bụ site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere ise nke elekere elekere ọ bụla.
Agala na Mọnde mgbe ụlọ akwụkwọ nwere ihe kacha mkpa. Njegharị bụ isi na-efu R $ 30, adịchaghị R $ 50 na Vip R $ 60. Enweghị onye ndu, ọbịbịa ahụ dị ọnụ ala, R $ 20. Ro nwere ike ịga site na metro, na-eji Line 2.
Dị ka o kwesịrị ịdị, saịtị ndị a abụghị naanị ihe Rio ga-enye, mana ịbịaru obodo ahụ ezughi oke ma ewepu ha. Ihe ndị ọzọ ga-adabere na mmasị na mmasị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Rio de Janeiro » Ihe 5 ị ga - eme na Rio de Janeiro